Ten Sports inks deal with Zimbabwe Cricket - Thatscricket Oneindia
Home » NewsTen Sports inks deal with Zimbabwe Cricket
Harare:Finally there' s some good news for the crisis-riddled Zimbabwean cricket board. Leading Dubai-based sports channel Ten Sports, has inked a sponsorship deal with the Zimbabwean cricket board. According to the ZCU sources, the new agreement includes sale of title sponsorship and advertising boards and would also cover India's tour of Zimbabwe in October 2005. The new deal guarantees a substantial increase in the income of the Zimbabwean cricket board. It's worth mentioning that in April this year, the Zimbabwe government had deported the Sky News TV crew out of the country citing breach of media laws. Read more about: news, harare, thatscricketcom, december 15, ten sports inks deal with zimbabwe cricket